Hery - Tsiky dia ampy | 3
2020-12-06 @ 13:01 in Sarimihetsika
Notezaina tao anaty boky romans aho fony kely. Tsy dia hoe notaizana ahoana fa i mama no tena mpamaky an'ireny collections "Fleuve Noir" sy "Série noire" ireny. Mpanakalo an'ireny boky ireny teny amin'ny tohatohabaton'Ambondrona mihitsy. Nisy SAS maromaro koa tsikaritro fa tsy dia voavakiko firy satria sarotra azo . Tom Clancy koa tena nahaliana ahy, na dia ny fonony fotsiny aza dia efa waow.
Angamba noho izany no nahatonga ahy tia films policiers fony kely ary nigorisa tsimoramora tamin'ny films espionnages izany taty aoriana. Vokany, James Bond rehetra efa saika hitako avokoa indrindra ireo nisian'i Sean Connery, Roger Moore (tiako kokoa), Thimoty Dalton, Pierce Brosnan (tsy haiko tamin'izany hoe naninona no nampanaovina James Bond) ary i Daniel Craig (nahafahako namaly hoe naninona no nampanaovina James Bond i Pierce Brosnan). Tsy aritro mihitsy rehefa misy resaka CIA, KGB ny film iray.
Amin'izao firongatry ny Video streaming izao, Netflix sy Amazon prime sy ny afa, dia ireo karazan-tsarimihetsika ireo no trandrahako voalohany, na nalaina tamin'ny tantara tena nisy na tantara noforonina.
Hapetrako tsikelikely eto ary ireo lohateny efa nojereko taloha sy vao nojereko mba ho tadidy hoe efa hita.
Raha misy hafa tokony ho hitako dia teneno ihany :-)
Anisan'ny vitako tato ho ato:
Body of lies (Mensonge d'Etat) (2008)
The Spy (2020)
Tsy misy mpanao pÃ´litika mangalatra izany
2020-11-23 @ 17:55 in Eritreritra mandalo, Fanatanjahan-tena
Nafana be indray ny vaovao androany hoe nahanton'ny FIFA mandritra ny 5 taona be izao andriamatoa Ahmad Ahmad iza filohan'ny CAF na ny federaziona afrikana momba ny baolina kitra. Izy ihany no Malagasy mba tonga teo amin'izany toerana izany hatramin'izao aloha. Resaka kolikoly, araka ny vaovao, no nahatonga izao fampiatoana azy amin'ny asany izao, satria tsy amin'ny maha filohan'ny CAF fotsiny, izay efa mamarana mandat rahateo izy, fa amin'ny resaka baolina kitra rehetra mihitsy.
Toa ny mahazatra dia miakatr'afo ireo "tia tanindrazana" ka miantsoantso hoe tsy rariny izao fa fanenjehana ny Malagasy. Misy aza moa no mieritreritra fa fanembatsembanana ny fandroson'ny BAREA izao ataon'ny FIFA izao. Mahagaga tokoa fa isaky ny mba nandroso kely ny BAREA dia misy misompatra foana.
Fa ny manahirana an'ity resaka Ahmad ity dia ilay raharaha tsy vao izao. Iza tokoa moa no tsy nahatadidy fa voatonontonona tao anatin'ilay fanadihadiana nataon'ny Canal+ ny anaran'ny filohan'ny Federasiona malagasy momba ny baolina kitra fahizany, Atoa Ahmad Ahmad. Na dia tsy izy irery aza fa ireo filohan'ny federasiona amin'ny firenena hafa koa, dia anisan'ireo nangataka vola sy nomen'ny Qatari vola izy. Mety hoe tsy misy ifandraisany amin'ny nahazoan'i Qatar ny fampiantranoana ny amboara erantany amin'ny baolina kitra amin'ny 2022. Mety hoe nomeny manontolo ho an'ny federasiona ny vola noraisiny... Fa misy fofompofona kolikoly hatrany ny zavatra tahaka izany.
Tsy nisakana azy tsy ho lany filohan'ny CAF anefa izany, saingy nipoaka indray ny raharaha tamin'ny 2019 mbola mikasika kolikoly ihany. Resaka fampiasana vola tsy araka ny tokony ho izy. Nilaza fa nandeha nanao iraka tany Rosia nefa toa tsy tany akory araka ny filazan'ny BBC. Sy ny maro hafa. Ary dia izao niafara tamin'ny fampiatoana azy amin'ny maha filohan'ny CAF izao.
Le président sortant de la Confédération africaine de football a été condamné à l’interdiction d’exercer toute activité relative au football pour cinq ans par la chambre de jugement de la Commission d’éthique indépendante de la Fifa. Ahmad Ahmad est notamment accusé de détournements de fonds.
La décision est tombée sous la forme d’un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association (Fifa). Le Malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football (CAF) et vice-président de la Fifa, est suspendu pour une période de cinq ans de toute activité liée au football professionnel.
Aleo ny fanadihadiana sy ny fitsaràna no hanambara na meloka na tsia Ahmad Ahmad, fa raha mbola ampidirana resaka politika foana ny resaka fanatanjahan-tena dia tsy maintsy hitranga ny resaka tahaka izao. Aleo ny resaka fanatanjahan-tena hahaleotena.
Na dia tsy mpanaraka baolina kitra malagasy loatra aza ny tenanay, na dia tsy mbola nino hoe mety ho an'ny Malagasy ny baolina kitra, dia mirary tokoa mba tsy hisakantsakana ny BAREA amin'ny lalana lalovany izao zava-mitranga izao.
2020-11-10 @ 19:06 in Eritreritra mandalo, Sarimihetsika, Kanto, Kolotsaina
Tato ho ato dia mahazo vahana ao amin’ny Netflix ny sarimihetsika afrikana. Tantara vokarina na tohanan’ny Netflix manokana. Angamba vokatry ny valanaretina COVID19 satria vitsy kokoa amin’izao ny horonantsary amerikana sy eoropeana noho ny fitandremana tsy ho voan’ny aretina. Misy rahateo ireo mpamokatra sarimihetsika no minia tsy mamoaka ny horonantsariny mba hialàna amin’ny fatiantoka.
Fa ny manaitra dia tantara tsotra, fiainana an-davanandron’ny afrikana no tantarain’ireo sarimihetsika ireo. Mikasika ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, hasin’ny vehivavy. Tsy dia noraisin’ny Netflix ireo horonan-tsary mampalaza ny afrikana mitantara famosaviana izay mampalaza ny mamokatra sarimihetsika Nizériana sy Gahaniana. Toa te haneho hoe miaina fiainana eo anivon’ny fotoana iainany koa ny Afrikana fa tsy voatery hiresaka mikasika ny fomban-drazana sy “folklore” foana.
Dia mampametra-panontaniana hoe hatraiza tokoa ny fivoaran’ny sarimihetsika malagasy amin’izao fotoana izao? Misy vokatra mivoaka foana nefa toa tsy dia tena lalina loatra. Fampihomehezana matetika no votoatiny. Misy ihany ny tsy dia natao hihomehezana saingy tsy mampitaintaina sy tsy manaitra loatra. Angamba tokony hiova lohahevitra amin’izay. Atao mitovitovy amin’ny tantara henoina. Tadidiko ireny tantara taloha nampalaza andry Vahandanitra, Solofo José, Clara, Gégé, Clotilde sns ireny. Mitangorona eo ambody vata fandraisam-peo avokoa ny rehetra. Sarotra be ve ny manatontosa ny toa azy ireny ho tonga sarimihetsika indray?
Mino aho fa raha manana votoatiny mafonja sy tsara rindra ny sarimihetsika malagasy mety mba ho tafakatra tsikelikely… ary nahoana moa no tsy ho tonga any amin’ny Netflix koa?
Ireto ireo films afrikana vitsivitsy ao amin’ny Netflix mety mahaliana, Adù, La convocation, Azali, Resgate...
2020-06-20 @ 09:08 in Dev, Teknolojia
Dia efa ilay Linux Mint 19 ity ampiasaiko ity amin’izao.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 130 131 132 Manaraka»